မြန်မာက အိမ်ရှင်ဖိလစ်ပိုင်ကို (၄-၀)ဂိုးဖြင့် အနိုင်ယူပြီး အာရှယူ-၁၉ အမျိုးသမီးခြေစစ်ပွဲအောင်မြင် | Freedom News Group
by FNG on October 21, 2012	၂၀၁၃ အာရှယူ-၁၉ အမျိုးသမီးချန်ပီယံရှစ်ခြေစစ်ပွဲအဖြစ် အောက်တိုဘာ(၁၉)ရက်နေ့က အိမ်ရှင်ဖိလစ်ပိုင်အသင်းနှင့် မြန်မာအသင်း
တို့ မနီလာမြို့ Rizal Memorial Track and Football Stadium ယှဉ်ပြိုင်ကစားခဲ့ရာ မြန်မာအသင်းက (၄-၀)ဂိုးဖြင့် ဂိုးပြတ်အနိုင်ရရှိ
ခဲ့သည်။ မြန်မာအသင်းတွင် ဂိုး- မေဇင်နွေး၊နောက်တန်း- အေးအေးမိုး၊ခင်ဇာဇာဝင်း၊ငုဝါသဲ၊အလယ်တန်း- စုနန္ဒာ၊၀င်းသိဂီင်္ထွန်း၊၀တ်ရည်
၊ရှေ့တန်း- နီလာဝင်း၊မေသူကျော်၊အေးမျိုးမြတ် တို့ပွဲထွက်ကစားခဲ့ကြသည်။
မြန်မာအသင်းအတွက် ပွဲချိန်(၁၅)(၈၅)မိနစ်တွင် နီလာဝင်း၊ (၆၁)မိနစ်တွင် ၀င်းသိဂီင်္ထွန်းနှင့် (၆၀)မိနစ်တွင် မေသူကျော်တို့က
အနိုင်ဂိုးများသွင်းယူခဲ့ကြသည်။မြန်မာအသင်းသည် ယခုပွဲအနိုင်ရရှိခဲ့သောကြောင့် ခြေစစ်ပွဲပထမအဆင့်အောင်မြင်သွားခဲ့ပြီဖြစ်ပြီး
လာမည့်ဒီဇင်ဘာလတွင် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ၌ ဒုတိယအဆင့်ပွဲစဉ်များ ဆက်လက်ယှဉ်ပြိုင်ကစားရမည်ဖြစ်သည်။
မြန်မာအသင်းသည် ပွဲဦးထွက်တွင် တရုတ်(တိုင်ပေ)ကို (၃-၁)ဂိုးဖြင့်အနိုင်ရထားရာ လက်ရှိအချိန်တွင် ၂ ပွဲနိုင်(၆)မှတ်ဖြင့်
အမှတ်ပေးဇယားကို ဦးဆောင်လျက်ရှိသည်။ အောက်တိုဘာ(၂၁)ရက်နေ့တွင် အုပ်စုနောက်ဆုံးပွဲစဉ်အဖြစ်ဟောင်ကောင်
သတင်းဆောင်းပါး မူရင်း ဖော်ပြထား သည့် နေရာ
From: အားကစားသတင်း	← မနန်းခင်ဇေယျာ ဆုနှစ် ခု ရရှိထား
ခုနှစ်ရက်သားသမီးများအတွက် ( ၂၂.၁၀.၁၂) မှ (၂၈.၁၀.၁၂) ထိ တပတ်စာဗေဒင်ဟောစာတမ်း →
Contact Us. info@freedomnewsgroup.com	Myanmar News in EnglishMyanmar Emerges From the ShadowsMyanmar's women boxers land blows for equalityUS blacklists Myanmar firms for NKorea arms tradeSoccer-Myanmar's fans riot after Southeast Asian Games knockoutU.N. agency says Myanmar, Golden Triangle opium cultivation jumpsUN: Poverty pushing Myanmar opium output higherUS blacklists Myanmar firms for arms trade with N.KoreaMyanmar's MPs lack resources27 th Myanmar SEA Game Opening Ceremony Dining & Wine Discover wines from around the world
FNG Facebook PageTotal Visitors:Since 16 December 2008	9,611,313 hits
10 Things You Need To Know Myanmar's Persecuted Muslim Minority huff.to/1cUUlSK via @HuffPostWorld5hours ago